Waa maxay qiyamka Maraykanka? Waa maxay muhiim ah in Americans? | USAHello | USAHello
Waa maxay qiyamka Maraykanka? Waa maxay muhiim ah in Americans?
Fahmaan qiyamka Maraykanka oo ay bartaan oo ku saabsan waxa muhiim ah in la Americans. Read sababta Americans qiimaha xornimada, sinnaanta, iyo in waqtiga. Waxaad arki doontaa sababta oo Maraykan ah tartan toos ah oo aan rasmi ahayn iyo sababta, yahay shaqada, iyo wax iibsan yihiin oo dhan muhiim ah ee USA.
In aad dalka, aad u badan tahay lahaa dhaqan adag iyo dhaqanka ah in aad qiimeeyo. In Maraykanka, waxaa jira qiimaha American sidoo kale muhiim ah. Kuwanu waa waxyaalaha jira wax ugu muhiimsan ee Maraykanka.
Mid ka mid ah qiimaha ugu weyn oo dalka Mareykanka ah waa madax-bannaanida. Independence waxaa mararka qaarkood loo yaqaan shaqsiyaddeenna. Americans iyo aad ugu faananynaa isagoo isku filan, ama ay awoodaan in ay is ogow Naftooda, oo waxay u muuqdaan in ay ka fekeraan dadka kale waa in ay noqdaan dad isku filan iyo sidoo kale. Marka qof gaadho gool, in waxaa caadi ahaan loo arkaa natiijada isaga ama iyada u gaar ah shaqo adag. Tani waa ka duwan yahay dhaqamada kale oo badan kuwaas oo ka badan wadareed. dhaqamada Collective u muuqdaan in ay u arkaan guulaha sida laga fekerayo ah oo qoyska oo dhan ama bulshada.
Halkan waxaa ku qoran tusaale sida madaxbannaanida Americans qiimaha:
carruurta American u muuqdaan in ay guriga ka baxaan sidii hore ka badan dhaqamada kale. Tusaale ahaan, ka dib markii qalin dugsiga sare, carruur badan si ay u tagaan kulliyadda ama shaqada bilowdo ka guurto. Haddii ay sii waday in ay ku noolaadaan guriga, waxay la weydiiyey oo laga yaabo in ay bixiyaan kirada ama ay gacan guriga.
Americans filan qof walba oo ay awoodaan in ay shaqeeyaan in sidaas la sameeyo si ay naftooda u taageeraan.
Americans gaarka ah qiimaha iyo meel iyaga u gaar ah. Iyadoo dhaqamada qaarkood oo raba gaarka ah waxaa lagu arki karaa sida wax xun, badan oo Maraykan ah jecel yihiin in ay leeyihiin waqti oo keliya waxaana laga yaabaa gaar ah oo ku saabsan mowduucyo gaar ah.
Halkan waxaa ah xaaladaha yar ee la xiriira qiimaha American ee u gaarka ah:
In wada hadalka, badan oo Maraykan ah kuwa gaar ah oo ku saabsan wax gaar ah oo aadan rabin in ay ka hadlaan iyaga oo ku saabsan, sida da'dooda, inta lacag ee ay sameeyaan, ama siyaasadeed, views galmada iyo diinta. Dadka qaar ma jecla hadalka ku saabsan maadooyinka in dadweynaha sababtoo ah waxa ay ka walwalsan waxa ka dhigi doonaa in dadka in ay ku doodi waa. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan mawduucyadan, waxaad na weydiisan kartaa. Dadka Maraykanka badidoodu waxay ku faraxsan inaan idin baro oo ku saabsan sida Americans eegto dunida.
Mareykanka oo inta badan siin kasta meel kale oo ka xaaladaha dadweynaha ka badan dadka dhaqamada kale. Waxay u muuqdaan in ay la qayb ka mid ah meel bannaan oo u dhaxeeya taagan, caadi ahaan fog ee cudud fidsan.
Dad badan oo Maraykan leeyihiin dayrarka agagaarka guryahooda si loo hubiyo in ay leeyihiin gaarka ah. Haddii carruurtaada lumin kubad ama toy kale arin deris ee, guud ahaan waa fikrad xun in ay ku boodaan arin iyo dib u soo ceshano toy ah. halkii, tag albaabka hore oo garaacayaa ama wac jalaska. Haddii ay jirto jawaab ma tago note on albaabka, weydiinaya ogolaansho in ay dib u soo ceshano toy u dhaxeeya 8 subaxnimo ilaa 8pm. Tani waa labada xushmad iyo nabad leh, sida dadka qaar leeyihiin eeyaha waardiyayaasha ama waxaa laga yaabaa in aad u ilaaliya ee ay gaarka ah. Odayaasha gaar ahaan caadi ahaan u baahan tahay nabad dheeraad ah oo xasilloon oo laga yaabaa in aanay rabin in lagu soo dhibtay. Haddii aad iridda ku furi waa in aad u xirto. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad u timid inaad iridda furan, ka tago furan.
Jiifka waxaa badanaa loo arkaa meelaha gaarka loo leeyahay. Dariska iyo saaxiibada waxaa lagu marti qaaday jikada, qolka cuntada ama qolka fadhiga. Waalidiinta iyo carruurta u muuqdaan in ay leeyihiin qol u gaar ah, iyo inta badan, carruurta American kasta leedahay qol u gaar ah.
Kuwaasi waa uun tusaale oo qaar ka mid ah ee u gaarka ah oo laga yaabo kala duwan ee dhaqanka.
Mareykanka oo inta badan ay yihiin kuwo aad si toos ah. Taas macnaheedu waxa weeye waxay inta badan aad u sheegto waxa ay la tahay iyo waxay noqon doonaan: xaqaagii oo ku saabsan waxa ay doonayaan. In adayg waxaa guud ahaan loo arkaa wax fiican in America.
Halkan waxaa ku qoran tusaale oo qaar ka mid ah directness-style American:
In qaar ka mid ah dhaqamada, waa ku fiicnayn inay hoos u martiqaad - tusaale ahaan, haddii qof ku weyddiiyo oo kugu qado, waxaadba oran kartaa haa, laakiin markaas ma qado tagaan. In America, waxaa had iyo jeer ka fiican in la yidhaahdo waa, “No, laakiin waad ku mahadsan” ama, “Mahadsanid, laakiin waxaan ku leeyihiin go'an kale.” Haddii aad dhihi haa in casuumad laakiin ha inay dhacdo ma tagaan, qofka laga yaabaa kacsan.
In wada hadal, haddii American ah oo diidan RAYIGAAG, inay kuu sheegi. Tani macnaheedu ma aha mana aad jeceshahay, kaliya si ay fikrad ka duwan.
Fikradda ah “badiyay wejiga” ma aha isku mid ah in America. Tarjumaadda for “badiyay wejiga” noqon lahaa “xishoodaan,” taas oo ka yar oo halis ah. Maraykanka waxaa laga yaabaa in ka xishoodaan haddii ay dhaleeceeyay ama khalad samayso, tusaale ahaan. Sidaas Americans farta laga yaabaa khalad ama kugu dhaleecaynayaan, si fudud u ku talo sida la saxo ama macluumaad waxtar leh.
In fasallada, Americans ka doodid laga yaabaa in macalimiinta’ fikradaha. In qaar ka mid ah dhaqamada, waa akhlaaq xumo si khilaafsan macalinkaaga.
Waxaa la ma aha fiicnayn inaad caawinaad weydiisato. Haddii uu saaxiib ama deris aad ku weydiineysaa haddii aad u baahan tahay wax, ay si dhab ah u doonaya inay taageeraan. Ogaaw in aad xor in la yidhaahdo, “Haddii aad doonaysid in aad dukaanka oo aad ku socotaan by liinta ah, fadlan kor ii soo qaado bac, oo anna waan bixin doonaa iyaga.” Or, haddii aad u baahan tahay dharka jiilaalka, tusaale ahaan, oo aadan hubin halka laga iibsan, waa OK si aad u weydiiso, “Ha aad qabto wax talooyin ah meesha aan ka soo iibsan kartaa jubbado aan qaali ahayn iyo kabaha loogu talagalay carruurta aan?” Dadka Maraykanka badidoodu waxay jecel yihiin inay caawiyaan, oo waxay u baahan yihiin dhiirigelin aad u yar si ay u noqdaan saaxiibo fiican iyo deriskooda.
Guud, waxaa wanaagsan in la xasuusto in wixii u muuqan kara qallafsan aan jidka in loogu tala galay. Americans aan la isku dayayaan in ay ku fiicnayn - waxay yihiin si toos ah.
Baaqa US The of Independence leeyahay, “Dhammaan Ragga Ma abuuray Equal.” Sida xaqiiqda ah, dadka qaar ka mid ah oo dalka Mareykanka ah had iyo jeer ma daweeyo dhammaan muwaadiniinta si siman, laakiin badan oo Maraykan ah dareemayaa si xoog leh oo ku saabsan fikrad sinnaanta. Waxaa jira tusaalooyin badan oo ku saabsan taariikhda Mareykanka, halkaas oo dadka oo dhan aan lagu daaweeyaa si siman sida addoonsiga of African American (madow) muwaadiniinta. Si kastaba ha ahaatee, Americans jecel yihiin in ay aaminsan yihiin fikirka ah in dadka oo dhan waa in ay leeyihiin fursado loo siman yahay. fikrad Tani waa qayb ka mid ah waxa loo yaqaan “Dream American.” waddanka u soo guurey hore oo badan ayaa u dhaqaaqay America in la raaco Dream Maraykanka. Waxay la aaminsan yahay in haddii aad si adag u shaqeeyey, aad u guurto karin ilaa bulshada.
Maanta dad badan ay ogaadaan Dream American ma aha run. Dad badan oo ka shaqeeya aad u adag aadan haysan lacag aad u badan. Inta badan dadka ka yimid jeeda mudnaanta leeyihiin waqti sahlan u dhaqaaqin ee dunida. weli, fikradda ah sinnaanta waa qayb muhiim ah oo ka mid ah dhaqanka Maraykanka.
Halkan waxaa ku qoran tusaale oo qaar ka mid ah sinnaan dhaqanka American:
• In xaaladaha sharci, dhamaan dadka Maraykanka waa in si siman loola dhaqmo iyo dhammaan Americans xaq u leedahay inaad wakiil qareen.
• In fasal, ardayda oo dhan waa in loola dhaqmo si siman by macalimiinta. Ardayna waa in la fadilay.
• Ragga iyo dumarka waa in loola dhaqmo si siman, iyo rag aan arko khayr badan haweenka. Sida xaqiiqda ah, haween badan oo weli aan haysan xaaladda la mid ah sida nin ee bulshada American, gaar ahaan marka la eego inta lacag ay ka dhigi kartaa.
• In America, ma jiro, madaxda bulshada ama nidaam rag & dumar si adag gundhig. Mararka qaarkood dad aad ka fili karto si aad ula dhaqmaan si ixtiraam leh kuula dhaqmaan laga yaabaa in sida siman ah. Tusaale ahaan, carruurta wici kartaa qof weyn oo ka weyn ay magaciisa ugu. Haddii ay taasi kugu dhacdo, isku day in aad xasuusato kama isagoo ku fiicnayn, laakiin waxay leeyihiin qiimo ka duwan dhaqanka.
• Mararka qaarkood Maraykanka ayaa kuu sheegi doona sida ay doonayaan in wax laga qabto, markay isku soo bandhigo. Haddii macallin ama dhakhtar nafteeda barayaa sida “Lucy” ama “Doctor Lucy”, waa sida ay tahay in aad wax ka qabato iyada. Haddii ay isku barayaa sida Dr. Wilson, waa waxa ay jecel yahay in loogu yeedho.
Waa waxtar leh in la ogaado in ay jiraan weli waxaa laga yaabaa in aan la arki karin sarayntii dadka ka mid ah. Kuwani waxay u muuqdaan in ay ku salaysnaan badan oo ku saabsan guusha shaqsi: tusaale ahaan, qof shaqo, Xoolo, ama waxbarasho.
xaalad aan rasmi
bulshada American waa inta badan aan rasmi ahayn iyo deganaasho.
Halkan waxaa ku qoran tusaalayaal ka mid ah sida dowladda Mareykanka ay ku dhaqanka aan rasmi ahayn:
• Americans labistaan ​​laga yaabaa in, sida xiran jiinis ah ama gaab xitaa shaqada, dugsiga, ama kaniisadda. Marka ugu horaysa ee aad bilowdo shaqo, waa fikrad wanaagsan inaad u labistaan ​​dheeraad ah si rasmi ah ka dibna si aad u dooratid labbiska ku salaysan waxa ay dadka kugu heeraro ka gashanayn.
• Marka Salaan qof, Americans u muuqdaan in la yidhaahdo, “hi” ama, “Hello.” Waxaad isticmaali salaan la mid ah iyadoo aan loo eegayn qofka aad la hadlayso: wiilkaaga ama macallinka wiilkiisa. langauge ma laha noocyada rasmiga ah iyo kuwa of Salaan.
• Americans u muuqdaan in ay soo wac kasta oo kale oo magacyadooda la sheegay waxay marka hore. Xaaladaha qaarkood, Si kastaba ha ahaatee, waxa fiican in aad u badan oo rasmi ah oo ay u isticmaalaan magacyo la soo dhaafay ilaa lagu weydiiyo in aad isticmaasho magaca koowaad - tusaale ahaan, in xaaladda ganacsi ama dugsiga.
Iyadoo xaalad aan rasmi dhaqanka US aad la yaab yaabaa in, waxaa loogu tala galay in aan ku fiicnayn. Dhab ahaan, haddii qof idin soo salaamaya aan rasmi ahayn oo aad ku baaqay in aad magaca koowaad, waxa laga yaabaa inay ka dhigan tahay inay u maleeyaan inaad ah iyo jid saaxiibtinimo.
Americans noqon kartaa tartan rasmi ah oo inta badan adag u shaqeeyaan si ay u gaaraan ujeedooyinkooda. Tartanka inta badan keenta Americans in uu noqdo mid aad u mashquul. Dad badan oo Maraykan u arkaan tartankan waa wax fiican.
Halkan waxaa ku qoran tusaale oo qaar ka mid ah qiimaha American tartanka:
• tartanka ganacsiga waxaa sabab in qayb weyn oo dhaqaalaha raasammaaliyade. model ganacsiga America waa in ay u tartamaan macaamiisha iyo qiimaha ugu fiican.
• Americans jadwalka badan oo hawlaha. Xitaa carruurta yaryar in badan oo hawlaha ka qayb qaataan ka baxsan dugsiga, sida cayaaraha, casharada music, oo iskaa wax u qabso. Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in aad dareento sida Maraykan ah “-daba-wareegida” waqti yar loogu talogalay nasashada. Laakiin dad badan oo Maraykan ah waxay dareemaan wanaag marka ay ka heli badan oo sameeyey.
• Tartanka waxaa laga arki karaa dugsiga, ee goobta shaqada, iyo isboortiga. Tusaale ahaan, ardayda shaqo adag laga yaabaa in ay gaaraan fasalada ugu wanaagsan. Mararka qaarkood tartanka ku lug leedahay kooxaha, sida kooxda kubada cagta ah ama koox waxbarasho dugsi.
• Mareykanka ayaa sidoo kale laga yaabaa in “tartami” qudhooda. Dad badan oo Maraykan adag u shaqeeyaan si ay u sii wanaajinta at waxa ay samaynayaan,. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa in ay doonayaan in ay baratamaya ka dhaqso badan waxay yeeleen mar la soo dhaafay ama laga yaabaa in ay doonayaan in ay iibiyaan alaabta dheeraad ah ay shaqo badan ay yeelayay sannad ka hor.
Guud ahaan, qiimaha saaray tartanka waxay keeni kartaa in aad dareento in qaar ka mid ah naxdinta dhaqameed, gaar ahaan haddii aad ka dhaqan in ka badan yahay iskaashi ka badan tartan yimid.
Time iyo hufnaan
Americans meel badan oo ka mid ah qiimaha ay waqti. Americans yaabaa in ay dareemaan niyad, haddii ay tahay in qof ama wax ku dhuminin waqtigooda. Americans Qaar ka mid ah u qorsheeyaan ay mar si taxadar leh, isticmaalaya jadwalka maalinlaha ah labada noloshooda gaar ahaaneed iyo nolosha shaqada. Waxaa jirta odhaah in America: mar waa lacag. Taas macnaheedu waxa weeye badan oo Maraykan ah jecel yihiin in ay u isticmaalaan waqtigooda “hufan” - ay doonayaan in ugu sameeyey xaddiga waqtiga ugu yar.
Tani waxay noqon kartaa waxa aad loo adeegsadaa in lagu kala duwan. Marka la samaynayo heshiis ganacsi, aad waqti laga yaabaa in helitaanka in la ogaado qofka kale, waxaa laga yaabaa in halka la cabo shaaha ama kafeega. In Maraykanka, waxa ay inta badan ma aha kiiska.
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah xaaladaha, taas oo laga yaabo in aad rabto in laga war hayo mar:
shirarka, gaar ahaan shaqada: Waa inaad isku daydaa inaad waqtiga – malaha xataa 5 Daqiiqadihii hore.
ballamaha: Haddii aad qabto ballan dhakhtar ama iniin cayn kale ah ee ballanta, aad u baahan tahay in ay timaado waqtiga. waxaa laga yaabaa in weli inaad sugto ballanta. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in aad ku jirto waqti ama waxaa laga yaabaa inaad ballan kale ballanta.
Hawlaha la saaxiibo: Haddii aad lagu martiqaaday in ay guriga qof casho, isku day in ay wakhtiga – waxaad noqon kartaa 5 ama 10 daqiiqo, laakiin haddii aad wax badan ka dambeyn in, waa in aad u badan tahay in wac oo u sheeg.
xisbiyada: Si xisbi yar, yimaadaan gudahood 15 daqiiqadood oo waqti la siiyo. Si xisbi ballaaran leh dad badan, waxaad noqon kartaa 30 in 40 daqiiqo.
Sharci fiican waa in mar walba aad u socotid noqon daahay, waa in aad wacdaa oo aynu qofka aad la kulmeysa ogahay inaad daahdo. Haddii aadan soo wici kartaa, waa inaad u sheegtaa qofka aad tahay ka xumahay in ay goor dambe marka aad timaado.
Mararka qaarkood, laga yaabaa in aad dareento sida qof waa mid aad u deg deg ah ka tagay ama waa in si dhaqso ah inuu ka tago. Tani waxay noqon kartaa sababtoo ah waxay doonayaan in ay “waqtiga” ay ballan soo socda. Taas micnaheedu ma aha mana aad jeceshahay.
In waqtiga iyo in laga war hayo mar waa kala duwan yihiin dhaqanka aad u baahan tahay si ay ula qabsadaan, maxaa yeelay haddii aad soo daahdo, waxaad waayi kartaa shaqo, seegi ballamahaaga, ama dhaawici kara qof ee dareenka. Haddii aad leedahay waqti adag qabsado dareenka American of time, laga yaabaa in aad rabto in aad hesho soo jeedo ama phone in uu leeyahay alarm ah inaan idin xusuusiyo waqtiga, gaar ahaan si loo helo in ay ka shaqeeyaan.
oo kubada Work
Americans la aad diiradda karo shaqadooda. Mararka qaarkood dadka dhaqamada kale qabaa Americans “ku nool-to-shaqada” ama waa “workaholics.” Taas macnaheedu waxa weeye, waxay u malaynayaan Americans aad u badan ka shaqeeyaan. Qayb ka mid ah sababta oo Maraykan ah shaqo-oriented waxaa ugu wacan in ay mashquul iyo firfircoon waxaa badanaa loo arkaa wax fiican. Dadka ayaa sidoo kale u muuqdaan in ay si adag u aqoonsadaan shaqooyinka ay. Tusaale ahaan, marka ugu horreysa ee aad la kulanto qof, mid ka mid ah su'aalaha ugu horeysay waxay ku warsan laga yaabaa in uu yahay “Maxaa sameysaa?” Waxay ka dhigan tahay, “Waa maxay nooca shaqada aad samaysaan?”
Ragga ama dumarka ka shaqeeya guryaha daryeelka qaadashada qoyska inta badan waxay isugu yeedhaan “home-dejiyeyaasha” oo waxay mudan yihiin ixtiraamka shaqo this sida ugu badan ee kale oo kasta. Marka buuxinta codsiga nooc kasta, waa OK in ay qoraan “home-dajiye” sida shaqo qof oo aan haysan shaqo bixinta guriga ka baxsan.
Sida ku cusub Maraykanka, aad mararka qaar u maleeyaan laga yaabaa in Americans muuqdaan waxyaalaha - diiradda lagu saaray lahaanshaha iyo iibsato waxyaabo. Qayb ka mid ah sababta waayo, kanu waa in badan oo Maraykan ah tartan qiimaha iyo shaqada. Sababtoo ah tartan qiimaha Americans, ay doonayaan in ay “la soco” kuwa ku xeeran. Taas macnaheedu waxa weeye, tusaale ahaan, haddii deriskaaga helay baabuur cusub, laga yaabaa in aad rabto in aad baabuur cusub ayaa sidoo kale. Americans this wac “ILAALI la Joneses ah.”
Dad badan oo Maraykan shaqada qiimaha iyo waxay leeyihiin a yahay shaqada xoog. Dad badan oo Maraykan u arkaan waxyaabaha wax sida telefishinada ama kabaha si ay u muujiyaan inay ku guulaysato shaqada. Americans qabaa waxaa laga yaabaa in alaabta wax abaalmarin ay shaqo adag iyo dadaal.
Sababta Americans kale oo laga yaabaa in wax-oriented waa sababta oo ah dad badan oo Maraykan cusaybka qiimaha iyo hal-abuurka. Sidaas xataa haddii ay leedahay telefoonka ah oo ka shaqaysa, waxaa laga yaabaa in ay doonayaan phone cusub maxaa yeelay waxa uu leeyahay muuqaalada cusub oo xiiso leh. Ma aha in aad si ay u dareemaan waa inaad haysataa badan oo hantidoodii la ixtiraamo. Waa in aad dareento raaxo nool si fudud ama si kasta oo aad jeceshahay, waxaa laga yaabaa in lagu badbaadinayo lacag badan xaaladaha degdegga ah, waxbarashada iyo hawlgabka halkii faqri on walxaha inuu soo jiito dadka kale.
Dhammaan oo ka mid ah weedhaha kor ku xusan yihiin guud ee qiimaha American. Qaadyo aan had iyo jeer run, laakiin wax walba oo inta badan waa run. Ujeedada USAHello waa in ay bixiso qaadyo inuu kaa caawiyo inaad si fiican u fahmaan sababta American ah oo laga yaabaa in lagu simaha hab aad fahmi weydo. Xusuusnow, Jidka innaba waa ka wanaagsan yahay hab kale - oo kaliya oo kala duwan.
Life ee USA
Maxaad Rockefellers ku soo dhaweyn qaxootiga - dhaqan ah American